ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပထမဆုံး ချင်းပြည်နယ် ရုံးခန်းဖွင့်
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Zomi Congress for Democracy (ZCD) ပါတီရဲ့ ပထမဦးဆုံး ချင်းပြည်နယ် ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို တီးတိန်မြို့၊ မြို့မရပ်ကွက်မှာ ဒီကနေ့ နေ့လည်က ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီဝင်များ၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီဝင်များ၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၅၀၀)ခန့် တက်ရောက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀ ကြိ်မ်မြောက် ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီ ညီလာခံ၌ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပူးကျင့်ရှင်းထန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်။
Photo courtesy of ZNC
ပြည်နယ်ပါတီ ဆိုင်းဘုတ်တင် အခမ်းအနားမှာ ပါတီဥက္ကဌ ပူးကျင့်ရှင်းထန်က အခုပါတီသစ် ZCD ဟာ နဂိုမူလ ဇိုမီးအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီမူအတိုင်း ဆက်လက်ရပ်တည်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွှတ်ရေးအတွက် ပင်လုံကဲ့သို့ညီလာခံဟာ အရေးကြီးကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မှသာလျှင် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပူဂင့်ကမ်းလျှမ် က ပြောပါတယ်။
ZCD ပါတီရုံးခန်းဖွင့်ရတာဟာ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတဲ့ အဓိကနိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပူဂင့်ကမ်းလျှမ် က ပြောပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့တို့က ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာတွေ ပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဇန်နဝါရီ ၁၁ရက်မှာ တွန်းဇံမြို့မှာ မြို့နယ်ရုံး ၁၄ရက်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှာ တိုင်းရုံး ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီး ချင်းပြည်နယ် ကျီခါးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း တမူးမြို့တို့မှာလည်း မြို့နယ်ရုံးခွဲတွေ ထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဇိုမီးအမျိုးသား ကွန်ကရက်ပါတီ ZNCဟာ ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၂ခုနှစ်က ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရပြီး ယခုအစိုးရလက်ထက် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရာမှာ ZNC အမည်နဲ့ လက်မခံတဲ့အတွက် ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ZCD အနေနဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ချင်းပြည်နယ် ၉ မြို့နယ်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
ဇိုမီးလူမျိုးများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆွေးနွေး
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် ဇိုမီး ကို လက်ခံဖို့တိုက်တွန်း
ဦးဝင်းတင်ကို အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး သူရဲကောင်းဆု ချီးမြှင့်
ဇိုမီး အမဵြိးသားကန်ြဂရက်စ် ရြေးကောက်ပြဲမဝင်ဖိုႛ ဆုံူးဖတ်
ရန်ကုန်၊ ထိုင်းနယ်စပ်နဲႛ နော်ဝေးတိုႛမြာ ခဵင်းအမဵြိးသားနေႛ ကဵင်းပ
အေူခခံဥပဒေူပန်လည်သုံးသပ်ဖိုႛ ဇိုမီအမဵြိးသားကန်ြဂရက် တိုက်တနြ်း
I am thankful of opening new ZCD party branch office; however,I'm still concerning about the politic system of Myanmar because the condition looks like in 1988 and 1991. We can't say the politics is going to change,but we can think it should be pretending for democracy.I would like everyone to review in 1991 election and before the election ;The politicians could do everything freely,but when the election had done,the politicians were hunting by the military leader. They oppressed and persecuted the people who active in democracy movements.So think before you do and don't happy when you getacandy andachance of doing something by someone.Thanks.
Jan 10, 2013 10:29 AM